ရီယိုဒီဂျနေးရိုး - I LOVE RIO DE JANEIRO - ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အကောင်းဆုံးခရီးသွားလမ်းညွှန်အချို့ကိုအပေါ်အကြံဉာဏ်တွေ, မြို့ပတ်ပတ်လည်ခရီးစဉ်, တောင်တက်, အနည်းငယ်သာလူသိများရတနာမြို့သူမြို့သားဧည့်သည်များမှရှင်းလင်းသောကြ၏။ တောင်ကြီး, ကမ်းခြေတွေ, ပန်းခြံများနှင့်အခြားပိုမို - ငါရီယိုအကောင်းဆုံးမတူကွဲပြားသောရှုခင်းများမွေ့လျော်ဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်နှင့်အထူးပြုအကြံပေးချက်များဆောင်တတ်၏ LOVE ။ စုံလင်သောဓာတ်ပုံကိုအခွင့်အလမ်းအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးရီယိုအတွက်မိုးရာသီနေ့ကသုံးဖြုန်းဖို့လမ်းအဖြစ်သင်တန်းတွေနဲ့လေ့လာရေးခရီးရန်။
အသေးအဖွဲများနှင့်လုံးဝနီးပါးအမည်မသိဘဏ္ဍာဥစ္စာတို့ကိုသလောက်ကျော်ကြားအထင်ကရအဆောက်အကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်တင်ပြကြသည်။ အသေးစိတျရီယို၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုရောက်ဖို့ရန်မည်သို့အပေါ်သတင်းအချက်အလက်, သို့မဟုတ်ဘယ်မှာအကောင်းဆုံးကိုလမ်းပြသောရှာတွေ့ခြင်းငှါ, Portal ကိုတလျှောက်လုံးကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ယင်း၏ကမ်းခြေကျော်ကြားသည့်ကမ္ဘာ့, ပွဲတော်နှင့်ခရစ်တော်၏အထင်ကရရုပ်ထုကိုရွေးနှုတ်သောသခင်, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ကောင်းစွာအများအားလူသိများသည်အဘယျသို့ကျော်လွန်သွားသောသမိုင်း, ယဉ်ကျေးမှု, ဓလေ့ထုံးစံများနှင့်သဘာဝတရား၏ကြွယ်ဝသောမြို့တမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကမ်းခြေ, monolithic တောင်တို့, ရေတံခွန်များ, အညစ်အကြေး, မြို့ပြသစ်တောများ, ကျွန်းများနှင့်ပင်ရေကန်အားလုံးရီယိုရဲ့မြို့တော်ကိုနယ်အတွင်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
စစ်ရေးမြေရိုးကိုလှပအသင်းတော်များ, ပြတိုက်, သမိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အဦးများ, အချင်းချင်းထံမှနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကွဲပြားခြားနားသောရပ်ကွက်ကိုဖြတ်ပြီးအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားသည့်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာများ, ကအလှတရားအတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ကြွယ်ဝသောမြို့တမြို့၏ဇာတ်လမ်းပြောပြခြင်းနှင့်ရီယိုရဲ့အံ့မခန်းသဘာဝတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖွယ်များအပြင်သည်။
2012 ခုနှစ်, ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အ patrimony နှင့်ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် site မှ Named, အဖှဲ့အစညျးမြို့တော်ရဲ့သဘာဝက setting ကိုမြို့ပြရှုခင်းနှင့်အတူ, နှင့်၎င်း၏ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ခြွင်းချက်အလှတရား၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်ပေါင်းစည်းကိုခြွင်းချက်လမ်းအအသိအမှတ်ပြုမှုအတွက် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့မှခေါင်းစဉ်ချီးမြှင့်။
ထို့အပွငျထိုကဲ့သို့သောခရစ်တော်ကိုအရုပ်ထု, Copacabana ကမ်းခြေမှာ, ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်များ, အ Tijuca သစ်တောနှင့်စစ်တပ်၏မြေရိုးအဖြစ်အများအပြားသည်ဒေသခံအထင်ကရအဆောက်အမီးမောင်းထိုးပြမှ, ယူနက်စကိုလည်း ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ကိုအနှစ်မှတဆင့်ဂီတသမား, ရှုခင်းနှင့်အနုပညာရှင်များမှထောက်ပံ့သောဖြစ်ပွားနေသောအနုပညာလှုံ့ဆော်မှုကအသိအမှတ်ပြု ။
ရာစုနှစ်တစ်ခုနီးပါးမျှအဘို့ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏အထင်ကရသင်္ကေတ - ရီယိုအတွက်အကျော်ကြားဆုံးအထင်ကရအဆောက်အခရစ်တော်၏ရုပ်ထုကိုရွေးနှုတ်သောသခင်ကို၎င်း, သကြားမုန့်ဖြစ်ကြ၏။ သို့သျောလညျး, မြို့အဖြစ်ကျော်ကြားမဟုတ်ပေမယ့်, ကိုယ့်အဖြစ်မမေ့နိုင်သောနိုင်, များစွာသောအခြားဆွဲဆောင်မှုပါရှိပါတယ်။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့, 30 မီတာအမြင့်ခရစ်တော်အားရုပ်ထု၏ကမ္ဘာ့ icon က Tijuca သစ်တောအမျိုးသားဥယျာဉ်၌, Corcovado တောင်တန်းပေါ်ရပ်တည်။ ဧည့်သည်များမြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်လှေကားမှတဆင့်ရုပ်ထုရောက်ရှိရန်နှင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံ၏ခြေရင်းမှာတည်ထောင် Chapel သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မှန်ကန်စွာရွေးချယ် Guanabara ဂလားပင်လယ်အော်၏ဖွင့်ပွဲပေါ်ရုပ်ထု, နှင့် 400 နီးပါးအမြင့်မီတာမြင့်တက်လာကနေဖြတ်ပြီး, ထိုသကြားမုန့်သောတောင်ပေါ် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့များ၏လက်မှတ်ရူပါရုံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤအံ့သြဖွယ်ကျောက်တုံးကျောက်ခဲဖွဲ့စည်းရေးအားလုံးဧည့်သည်အချို့ခမ်းနားအမြင်များနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုအဘို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ တောင်တက်၎င်း၏ monolithic အထွဋ်နှင့်ဧည့်သည်များကိုသတျခဲ့တာပါ, ခရစ်တော်၏မြို့တော်သည်ရွေးနှုတ်သောသခင်နှင့် Copacabana ကမ်းခြေမှာ၏ဝေဟင်အမြင်များအပါအဝင်တိုက်ကြီးအတွက်အများဆုံးယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမြင်များကိုတဦးအဘို့, လက်ျာတောင်ထိပ်ကေဘယ်လ်ကားကနေတဆင့်ခရီးသွားလာနိုင်စူးစမ်းလေ့လာနိုငျသညျ - နောက်ထပ်အဓိက တမြို့လုံးအတွက်မှတ်တိုင်။
ဒီမှာအဓိကဆွဲဆောင်ကြည်လင်သောအပြာသမုဒ္ဒရာနှင့်ခွင့်ပြုအားလုံးလှုပ်ရှားမှုများကိုဖြစ်ခြင်းအတူ - ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်ကမ်းခြေတစ်ခုမှာ, Copacabana ကမ်းခြေမှာစားသောက်ဆိုင်, အရက်ဆိုင်, စျေးဆိုင်, ဖက်ရှင်ဖက်ရှင်ဆိုင်များ, ရုပ်ရှင်ရုံ, ပန်းချီပြခန်းနှင့်ပြပွဲတစ်ခုကျယ်ပြန့်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုနေရာဖြစ်သည် ထိုကဲ့သို့သောရေနေသတ္တဝါများနှင့်ကမ်းခြေအားကစားအဖြစ်, biking, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးဒဏ်ငွေသဲအပေါ်လျှော့ပေါ့ခြင်းနှင့်အမြင်များကိုပျော်မွေ့, ရွရွပြေးတာ။
အနီးအနားမှာ, Ipanema ရီယိုရဲ့ Deluxe ဝဠာ၏ဗဟိုချက်ဖြစ်ပါသည် - ဧည့်သည်များ၏ကဗျာဆရာတွေ, ဂီတသမားများနှင့်သန်းပေါင်းများစွာကချစ်, ဒီရပ်ကွက်ဟာကမ္ဘာ့အတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးမြို့ပြဒေသကမ်းခြေနှင့်အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေစျေးဆိုင်အချို့အရပျတစျခု, ဖက်ရှင်ဆိုင်များမှမူလနေရာဖြစ်သည် နှင့်တိုင်းပြည်အတွက်ပန်းချီပြခန်း။ ဒါဟာထိုကဲ့သို့သော Morro Dois Irmãosတောင်ကို turquoise ရေပိုင်နက်အတွင်းနှင့်လှပသောကမ်းခြေ goers အဖြစ်အမြင်များ, ခံစားဖို့အံ့သြဖွယ်ရာအရပျပါပဲ။
ရီယို၏အများဆုံးအသုံးမပြုနိုင်နှင့် touristy ဒေသများ၏တဦးတည်းမှာတည်ရှိပါတယ်, အဆိုပါ Morro Dois Irmãosတောင်တော်သို့မကြာခဏသွားရောက်လည်ပတ်ပေမယ် Ipanema နှင့် Leblon စဉ်၏ခရိုင်မှာများစွာသောအမြင်ကိုကမ်းလှမ်းသည်မဟုတ်, တိုက်ရိုက်ထံမှဖြတ်ပြီး, အ Cagarras ကျွန်းများတို့သည်ကြီးစွာသော half- အဘို့လုပ် နေ့ကလှည့်ခရီးသွားများနှင့်မြို့သူမြို့သားတစ်မူထူးခြားသောမြင်ကွင်းကိုဆက်ကပ်။ အနည်းငယ်ကီလိုမီတာ Ipanema ကမ်းခြေကနေတည်ရှိပြီး, ဤကျွန်းစု, သဘာဝနှင့်ဘရာဇီးရဲ့ဇီဝမျိုးကွဲနဲ့ရငျးနှီးတဲ့တှေ့ဆုံ၏ search အတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်ကြီးမြတ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်, ခိုလှုံရာအဖြစ်, ရေဒါမှမဟုတ်လေထဲကအဏ္ဏဝါတိရိစ္ဆာန်များအများအပြားမျိုးစိတ်ဒီမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ယနေ့အချိန်အခါ, သန်း 1.6 ကျော်ကလူကိုနှစ်စဉ်ရီယိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်း, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အတွက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတရာနှစျကျြောအတှကျလေ့လာမှုတွေအားကောင်းခဲ့သလိုသိရသည်နေစဉ်, အဘယျမွို့သို့ဧည့်သည်များဆွဲဆောင်သိသိသာသာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ မူလကအဆိုပါသကြားမုန့ cable ကို-ကားတစ်စီးကနေတဆင့်လက်လှမ်းမကြီး, ခရစ်တော်ရုပ်ထု Corcovado တောင်ပေါ်မှာမတည်ရှိခဲ့, နှင့်ကမ်းခြေအန္တရာယ်ရှိတဲ့နှင့်သာကုထုံးဗတ်အတှကျအသုံးပွုအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ နေဆဲအများအပြားအံ့ဩဘှယျသောအရပ်တို့ကိုမဒီနေ့ရဲ့ဧည့်သည်များအားဖြင့်လုံးဝနီးပါး unexplored ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း, - အမှုအရာသေချာပါပြောင်းလဲပြီ။
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူကိုဆွဲဆောင်နှင့်ထူးဆန်းကမ်းခြေတွေ, တောင်ကြီး, ပန်းခြံများ, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့များ၏ထူးခြားတဲ့ရောစပ်အသုံးပြုပုံအနုပညာ, စာပေ, ကဗျာနှင့်ဂီတ၏ပုံစံအမျိုးမျိုးများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုပေးသည့်ကြသည်။
ပြတိုက်, ပန်းချီပြခန်းနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံသဘာဝမြို့ပြဒေသမြို့တော်များနှင့် favelas ၏ဒီကဗျာလိမ္မာပါးနပ်နှင့်တွေ့ဆုံသည့်နေရာတွင်တစ်ဦးအတော်လေးသိသာထင်ရှားသောရှုခင်းကဝိုင်းနေကြတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး options အမျိုးမျိုးကိုတမြို့လုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ကြုံနေရ၏ဧည့်သည်များအများအပြားလွယ်ကူသောနည်းလမ်းတွေခွင့်ပြုနေစဉ်နေထိုင်ရန်အဆောင်များနှင့်တိုက်ခန်းများ၏ခင်းကျင်း, လညျပတျမှုအဖြစ်သက်သာနဲ့ပျော်စရာပါစေ။
ရီယိုရဲ့တောင်ကြီးတို့ပေါ်ကနေတပတျဝနျးကငျြနပေုံ၏ခမ်းနားအမြင်များကိုယူနှင့်၎င်း၏ texture ဆက်စပ်မှုတွေဖမ်းယူနိုင် - တောင်များနှင့်ပင်လယ်, သစ်တောနှင့်မြို့, မြင့်တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းနှင့် sprawling favelas အကြား - တစ်လမ်းအတွက်ကြောင့်မြေထဲကမြင်ယောင်ရန်ခက်ခဲကြောင်း။
Pedra က de Gáveaညီတူညီမျှဖမ်းဆီးအမြင်များနှင့်အတူအတန်ငယ်ပိုပြီးစိတ်အားသန်သောလေ့လာရေးကမ်းလှမ်းစဉ်သကြားမုန့်,​​ Corcovado နှင့် Dois Irmãosဤဆင်ခြေလျှော၏အများဆုံးဂုဏ်ပြုများကြားဖြစ်ကြ၏။
အဆိုပါ Tijuca အမျိုးသားဥယျာဉ်ရီယို၏စိတ်နှလုံးရန်အလွန်နီးကပ်တည်ရှိပြီး, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးသောမြို့ပြသစ်တောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်တောင်တောင်ကုန်းနှင့်အသေးစားတောင်ကိုကြွယ်ဝသော, ကကျောက်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အစုလိုက်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် jutting, ခေတ္တနားနေတဲ့ရေတံခွန်ခံစားဖို့ဒါမှမဟုတ်ထူးခြားဆန်းပြားမန်များ, တောတွင်းစပျစ်နွယ်ပင်မှာအံ့ဩဖို့ခွင့်ပြုခြင်း, စောက် crevices နှင့် hidden လမ်းကြောင်းတလျှောက် exhilarating မြင့်တက်မှုများဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယင်း၏တောင်ထူထပ်သောရက်တွေထဲကနေဧည့်သည်သစ်တော၏ကြီးစွာသောအနံကျယ်ပြန့်မြင်နိုင်ပါသည်, အောက်မြို့အ panorama မြင်ကွင်းကိုပညတ်အတွက်ယူ။
ရီယိုမြို့တော်ကိုဥယျာဉ်များ, သစ်တောများနှင့်ပြည်နယ်ပန်းခြံအပါအဝင်ကြီးမြတ်တဲ့အစိမ်းရောင်မျက်နှာ၏တစ်ခုခြွင်းချက်ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်ရှိတယ်။ Botafogo နှင့် Centro အကြားကမ်းခြေတလျှောက်တွင် "Parque ပြုပါ Flamengo," သို့မဟုတ် Flamengo Park ကလို့ချေါတဲ့စိမ်းလန်းစိုပြေစိမ်းလန်းသောမိုဃ်းမျက်နှာကြက်သည်။ အကြီးစား, ထူးခြားဆန်းပြားသောသစ်ပင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်ပဲလျှော့ပေါ့, skating, လေ့ကျင့်ခန်း, စက်ဘီးစီးလူတွေအပြေးတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်ရှိရာလမ်းကြောင်းကိုတန်းစီ။
သစ်ပင်များနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့မျိုးစိတ်မြင့်မားသည်, "Jardim Botânico," သို့မဟုတ်ရုက္ခဗေဒပန်းခြံ, စံပြတည်နေရာကိုဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအပင်တစ်အထင်ကြီးစရာကောင်းမတူညီရွေးချယ်ရေးမှအိမ်ရှင်အဖြစ်ကုထုံးနှင့်ဆေးဝါးစ​​က်ရုံများ, ထိုဥယျာဉ်နှင့်ဖန်လုံအိမ်၏စိုက်ပျိုးမှုအဘို့အများစုတော်ဝင်မိသားစုက 1808 ခုနှစ်တွင် Created - အရှေ့တိုင်းထိုကဲ့သို့သော vanilla နှင့်သစ်ကြံပိုးအဖြစ်နံ့သာမျိုး, ပေါ်တူဂီနှင့်ဂီယာနာထံမှဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, နှင့်အပင်, လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ထံမှသစ်ပင်များနှင့် cacti ။
အဆိုပါ "Parque သဘာစည်ပင်သာယာက de Marapendi," သို့မဟုတ် Marapendi စည်ပင်သာယာ Park မှရီယို၏အနောက်ဇုန်ကနေတဆင့်လက်လှမ်း, တောင်တက် picnicking နှင့်ကစားကွင်းအတွက် frolicking အပါအဝင်လှုပ်ရှားမှုများရဲ့ array နှင့်အတူဧည့်သည်များသည်။ Barra ကို da Tijuca ၏ခရိုင်တွင်တည်ရှိသောအဆိုပါ "Lagoa က de Marapendi," သို့မဟုတ် Marapendi ဂွ, သာယာလှပအမြင်များ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေပိုင်နက်အတွင်းနှင့်ငှက်နှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ array ထဲမှာပေါကြွယ်ဝသည်။ ဧည့်သည်များမှာလည်းအိုင်တစ်လျှောက်သာယာလှပလှေကိုခရီးစဉ်ကိုခံစားနိုင်။
မြို့ထဲတွင်အကျော်ကြားဆုံးဂွကိုလည်းအဖြစ်လူသိများသည် "Logoa ရိုဒရီဂိုက de Freitas," က "ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏နှလုံး။ " ဤသည် placid အိုင်ရေနေသတ္တဝါနှင့်မြေယာအားကစားအမျိုးမျိုးတို့ကိုလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လေ့ကျင့်ဖို့အဖြစ်ကောင်းစွာ, မြို့များ၏အမြင်များကိုခံစားဖို့အလွန်ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လှေလှော် မှစ. , ရွရွပြေးသို့မဟုတ်ယောဂနှင့်နေရောင်ကိုရေချိုးလေ့ကျင့်, trekking, biking ငှါ, ဂွပတျဝနျးကငျြလမ်းကြောင်းကိုအနားယူနှင့်ရီယိုအတွက်များသောအားဖြင့်လတ်ဆတ်တောက်တောက်ရက်ပေါင်းပျော်မွေ့, ထွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အများကြီး options ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဖိုးတန်ငွေရတတ်သောသူသမိုင်း၏သတိပေးတဲ့, ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အဖြစ်, စစ်ရေးမြေရိုးတစ်အရေအတွက်ကမ်းခြေနှင့်မြို့၏ skyline ကိုအဖြစ်ခရိုင်များစွာလျှောက်လုံးအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားအသင်းတော်များနှင့်အထိမ်းအမှတများစွာကြွယ်ဝစေ။
အဆိုပါအထင်ကရနှင့်အမှန်တကယ်မူထူးခြားတဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း de Sao Sebastião ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ကို Carioca ကြောင့်လူနှင့်၎င်း၏မှော်ဒီဇိုင်းမှာရှာတွေ့သောသူဧည့်သည်များ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ, အနုပညာနှင့်နေရောင်ခြည်၏လျှို့ဝှက်ချက်ဆုလာဘ်၏ယုံကြည်ခြင်းဖို့ရန်အလွန်ခေတ်မီအသက်ရှုမှားအဆောက်အဦနေရာဖြစ်သည်လုပ်ပါ။ ယင်း၏ conical ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖွဲ့စည်းမျက်နှာကျက်မှကြမ်းပြင်ကနေသှားရာက၎င်း၏ပြူတင်းပေါက်များအတွက်ခြယ်ဖန်ခွက်အနုပညာကျော်ကြားခြင်း, ဗိသုကာပညာ၏ဤကျောက်မျက်ကြောင့်ကမ္ဘာ့ရန်၎င်း၏တံခါးရွက်ဖွင့်လှစ်ရှိရာမြို့, ၏ဘဏ္ဍာရေးအလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည် အသက် 70 ရဲ့။ လူ 20,000 များအတွက်အခန်းတစ်ခန်းရပ်နေနှင့်အတူ, ကအလွယ်တကူတောင်အမေရိက၏အကြီးဆုံးဘုရားကျောင်းတဦးအဖြစ််တီထွင်နိုင်ပါသည်။
မနီးမဝေး, Copacabana နှင့် Arpoador ၏ကမ်းခြေအကြားသတ္တိရှိရှိအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုမျက်နှာကို Copacabana ဝိန်း ခံတပ်ဆိုလိုတာပါ။ 1914 ခုနှစ်ကတည်ဆောက်, 1987 ခုနှစ်တွင်ကမ်းရိုးတန်းကာကွယ်ရေးအတွက်ပိတ်လိုက်ပြီမှီတိုငျအောငျကဒီလက်နက်ကိုင်ဘန်ကာရီယိုရဲ့ကမ်းခြေစောင့်ကြပ်ပေမယ့်ဧည့်သည်ပဲခုခံကာကွယ်ကြောင်းမြို့ရိုး၏ခွန်အားနှင့် Krupp အမြောက်များလေးစားပါတယ်နိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်ကြောင့်တပ်မတော်သမိုင်းပြတိုက်တွင်အဖြစ်အသုံးပြုနှင့်ယင်း၏တည်နေရာကိုမဟာဗျူဟာကျကျ 360 °သောရူပါရုံကိုအတူဧရိယာကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်ခူးခဲ့တာကြောင့်, ဧည့်သည်ကမ်းခြေမှာ၏လှပသည့်လက်ငင်းနှင့်တပြင်လုံးကိုဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပေးသည်ဖြစ်ပါတယ်။
လှပသောနှင့် Jardim Botânico၏ခရိုင်၏ဆင်ခြေဖုံးတွင် "Parque Lage" သမိုင်းကြောင်းအသိသာဘရာဇီးကိုလိုနီနယ်ချဲ့၏အချိန်နေတဲ့သော့ချက်သမိုင်းဆိုင်ရာမှတ်တိုင်ဖြစ်တယ်, လှပသောဥယျာဉ်ကိုနေရာဖြစ်သည်။ ရှေ့တော်၌ပေါ်နန်းတော်, ကို "Escola က de Artes Visuais", Visual Arts ၏ School မှခေတ်ပြိုင်အနုပညာကိုနှင့်အတူဘေးတဘက်တချက်က 19 ရာစုအစောပိုင်းဗိသုကာပညာ၏ခေတ်မီဆန်းပြားအလှတရားထားပါတယ်။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အနုပညာကမ္ဘာမှ၎င်း၏ contribution များကိုများအတွက်အတိတ်ဆယ်စုနှစ်ချီးကျူ​​းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဤသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမြို့အနှံ့ပန်းချီပြခန်းနှင့်ပြပွဲအတွက်အစိုးရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ "Museu က de Arte ရီယို, ဘူး" သို့မဟုတ်ရီယိုအနုပညာပြတိုက်, 2013 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း, ထိုနှစ်တွင်တစ်လျှောက်လုံးကြည်နူးဖွယ်ပြပွဲနှင့်ဖြစ်ရပ်များအား HOST ခဲ့သည်။ အဆိုပါ "Museu က de Arte Moderna," သို့မဟုတ် Modern Art ကိုပြတိုက်အဖြစ်ကို "Centro ယဉ်ကျေးမှု Banco Brasil, ဘူး" သို့မဟုတ်ဘရာဇီးကယဉ်ကျေးမှုစင်တာဘဏ်ကိုလည်းတစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးနိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုပြပွဲအချိန်စာရင်း။
ရီယိုရဲ့ယဉ်ကျေးမှု repertoire ၏နောက်ထပ်ရှုထောင့်က၎င်း၏ပြဇာတ်ရုံ, နှင့်အနုပညာဖျော်ဖြေ၏ကျယ်ပြန့်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ "Teatro စည်ပင်သာယာ," သို့မဟုတ်စည်ပင်သာယာပြဇာတ် 'မြို့ထဲတွင်အများဆုံးဒီကဗျာအဆောက်အဦးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 1909 ခုနှစ်တွင် Baroque စတိုင် built-in ပါကအဓိကအားဖြင့်ဂန္ဖျော်ဖြေပွဲ, Opera နဲ့ဘဲလေးထားပါတယ်အဖြစ်အချို့သောဂီတပြဇာတ်ရုံ။
အားလုံးအရသာ, နောက်ခံအရှေ့တိုင်း၎င်း၏သိုးခြံကလူသို့ကြိုဆို - ရီယိုရဲ့တွေကတော့လုံးလုံးထူးခြားလက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှု, တက်ကြွဂီတ, အရောင်တစ်ရောင်စဉ်များနှင့်အရောင်တောက်ဘို့စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ပြည့်စုံသည်။
ရီယိုရဲ့ bohemian ခရိုင်, နှင့်ကို Santa Teresa ၏ရပ်ကွက်အတွင်းမှတက်သောတောက်တောက် tiled ခြေလှမ်းများမှအိမ်သို့အဝင်ဝအထိမ်းအမှတ်သောအဖြူ arcs ကျော်ကြားတဲ့ Lapa လောကရှိအဘယ်သူမျှမကအခြားနေရာအရပ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ လမ်းများထိုကဲ့သို့သော Samba, Forróနှင့် Funk အဖြစ်တက်ကြွရိုးရာဂီတထုတ်လုပ်တဲ့အရက်ဆိုင်အတူစီတန်းနေရောင်စုံတင်းကုပ်များ, ကော့တေး, ဘီယာနှင့်လမ်းပေါ်စားနပ်ရိက္ခာငရုတ်ကောင်းဖို့အတွက် walkway ရောင်းချခြင်း။
နေစဉ်အရက်ဆိုင်နှင့်ရင်ပြင်ငရုတ်ကောင်းစတိုင်နှင့်ခေတ်မီဆန်းပြားထူထောင်မှုရီယိုရဲ့နေထိုင်သူများ၏ပျော်ရွှင်သောဂီတနှင့်စကားများသောနှင့်အတူပြံ့နှံ့ရှိသမျှရပ်ကွက်အတွင်း, Copacabana, Ipanema နှင့် Leblon ၏ခရိုင်၌တွေ့နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါစျေးနှုန်းသက်သာတည်းခိုခန်းစက်မှုလုပ်ငန်းရီယိုအတွက်ကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှပိုင်ရှင်တွေတတ်နိုင်သမျှမိမိတို့အထူထောင်မှုအဖြစ်ချစ်စရာကောင်းနဲ့ထူးခြားတဲ့လုပ်မဆုပ်အနစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။ သူတို့ကအခန်းပေါင်းနှင့်မီးဖိုချောင်နေထိုင် shared အရက်ဆိုင်၏အသိုင်းအဝိုင်းကတိုးမြှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးလေ့ရှိကြသည်။
တမြို့လုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည့်ဇိမ်ခံနေရာထိုင်ခင်းတစ်ခုသိသာထင်ရှားသောသူအရေအတွက်လည်းရှိပါတယ်။ ထို plushest ဟိုတယ်များရေကန်, အရက်ဆိုင်, saunas နှင့်အနှိပ်ခန်းန်ဆောင်မှုရေကူး, အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်အစားအစာနှင့်အတူဧည့်သည်များပေး Copacabana, Ipanema နှင့် Leblon ၏ဖက်ရှင်ခရိုင်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်၏အချို့။
မြေမှတ်တိုင်တို့ကို Copacabana နန်းတော်သို့ 5-ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်တောင်အမေရိကရဲ့စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးမှာဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကျိန်းသေ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အတွက်တစ်ဦး-ကိုတွေ့မြင်မဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 1923 ခုနှစ်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှခရီးသွားဧည့်မှ၎င်း၏တံခါးရွက်ကိုဖွင့်ပါ, အဲဒီနောက်ကတည်းကအနည်းငယ်အမည်ကိုမှ, ထိုကဲ့သို့သော Marilyn Monroe, သမ္မတကတော်ဒိုင်ယာနာနှင့် Luciano Pavarotti အဖြစ် Carioca မြို့တော်အချမ်းသာဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးဧည့်သည်များ, အချို့ကိုနေသေးသိရသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ရီယိုလာရောက်လည်ပတ်သူတို့အဘို့, မြို့၏ထွန်းသစ်စစီးပွားရေးနှင့်ခေတ်မီသောခရိုင်, Barra ကိုက de Tijuca အများအပြားစတိုင်ဟိုတယ်များရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော Catete, Flamengo နှင့် Lapa အဖြစ်မြို့ရဲ့အလယ်ဗဟို, ထိုသို့ဝန်းရံသောခရိုင်ပတ်ပတ်လည် dotted နှငျ့ညီညှတျနှင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဟိုတယ်က options တွေကိုလည်းရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်သာယာသော option ကိုတိုက်ခန်းငှားခသည်။ အတော်ကြာမြင့်မားတဲ့အောင်မြင်တဲ့ On-line ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ရောက်ရှိလာမှုနှင့်အတူအားလပ်ရက်ဒီလိုမျိုးအတွက်မကြုံစဖူးမြင့်တက်လာရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ခရီးသွားများအတွက်တိုက်ခန်းများနှင့်အိမ်များတွင်အပြည့်အဝအလှဆင်နှင့်ဆက်ဆံရေးနွေးထွေးအခန်းပေါင်းထွက်ငှားရမ်းခြင်းဖြင့်အိမ်ကနေမှမိမိတို့နေအိမ်တွင်ရွေးနိုင်ဖြစ်ကြ၏။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ပတ်လည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြို့အဆိုတစိတ်တပိုင်းအလွယ်တကူစေသည်။ ရီယိုအနေနဲ့စစ်မှန်ခရီးစဉ်အစာရှောင်-စီးဘတ်စ်ကားတဦးအပေါ်တစ်ဦးစီးနင်းယူပြီးမပါဘဲပြီးပြည့်စုံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ နောက်တစ်နည်းမီထရိုမြန်ဆန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်မြို့ထဲတွင်ရေပန်းအစားဆုံးခရီးသွားဧည့်ခရိုင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ငှားရမ်းအထူးသဖြင့်နေသာနေ့၌ဟာအလွန်သာယာသော option ကိုရနိုင်ပါသည်။ အားလုံး Leblon, Ipanema, Copacabana, Leme, Botafogo နှင့် Flamengo အတွက်ကမ်းခြေ၏အဓိကပို်တလျှောက်မှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စက်ဘီးလမ်းကြောင်းရှိပါတယ်။ အလားတူပဲ, ရိုဒရီဂိုက de Freitas ဂွဝန်းရံကြောင်းလမ်းခရီးတစ်ကြည်နူးဖွယ်နှင့် picturesque စက်ဘီးစီးနင်းများအတွက်စံပြဖြစ်ကြ၏။
ဒါကြောင့်တမြို့လုံးအနှံ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်, အသွားအလာ-အခမဲ့စီးနင်း, သို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်ရဲ့တစ်နှစ်ယောက်သားအပန်းဖြေလေ့လာရေးခရီးရဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်, သမားရိုးကျတက္ကစီနှင့် moto-တက္ကစီစီးသည်မြို့ကိုပတ်ပတ်လည်ရဖို့အထိရောက်ဆုံးနှင့်အပါးနည်းလမ်းအချို့ရှိပါတယ်။
ရွက်လှေနှင့်ရဟတ်ယာဉ်လည်းရီယိုရဲ့မြရေသည်နှင့်သာယာလှပကျွန်းများကိုတွေ့ကြုံခံစားနှင့်နပေုံ၏လှပတမူထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များကိုရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာနည်းလမ်းတွေကိုဆက်ကပ်။ တောင်ကြီး, ကမ်းခြေတွေ, သစ်တောတွေနဲ့ထပ်မြင့်အဆောက်အဦးဧည့်သည်များမဆိုထောင့့်ကနေအသက်ရှုမှားအမြင်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, တစ်ဦးစိတ်ကိုဖမ်းစားဖက်ရှင်အတွက်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်သို့ meld နှင့်ဘယ်တော့မှမ - ရီယိုလောကရှိမည်သည့်မြို့ရဲ့အများဆုံးအသက်ရှု-ဆည်းပူးနေနှင့်မူထူးခြားတဲ့မြေမျက်နှာသွင်ပြင်၏တဦးတည်းဂုဏ်ယူ အထက်မှထက် သာ. ကောင်း၏။
ငါရီယိုမြို့ရဲ့ခရီးသွားဧည့်မှအများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစရာ, ပျော်စရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုညျခှနျအားအတှေ့အကွုံပံ့ပိုးဖို့သန္နိဋ္ဌာန် LOVE ။ အဆိုပါ Portal ကိုစားသုံးသူနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်သွယ်မှုများကိုဖွဲ့စည်းရန်စိတ်အားထက်သန်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ခရီးသွားဧည့်တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဆောင်းပါးတခုစီဝဘ်ဆိုဒ်, လိပ်စာ, ဖုန်းနံပါတ်နှင့်ဖွင့်လှစ်နာရီခန့်အပါအဝင်အားလုံးလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်, ပေးပါသည်။
ငါရီယိုချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ပျော်စရာရီယိုအတွက်မဆိုနေထိုင်အောင်အတွက်ကူညီပေးနေ, ဧည့်သည်များအတွက်အချက်အလက်များ၏မူလတန်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် LOVE ။